10 Bhenefiti yeVatengi Kuvimbika & Makomborero Zvirongwa | Martech Zone
Neramangwana risina chokwadi rezvehupfumi, zvakakosha kuti mabhizinesi atarise kuchengetwa kwevatengi kuburikidza neakasarudzika vatengi ruzivo uye mibairo yekuvimbika. Ini ndinoshanda pamwe nedunhu rekutakura chikafu chekuendesa uye chirongwa chemubairo chavakagadzira chinoramba chichiita kuti vatengi vadzokere kakawanda.
Mutengi Kuvimbika Statistics
Sekureva kwaAxpress's Whitepaper, Kuvaka Kuvimbika KweBrand muCross-Channel Nyika:
34% yevagari vemuUS vanogona kutsanangurwa sevanotenda vakatendeka
80% yevatengesi vakavimbika vanoti havangotenge mabrand asingazivikanwe kungo chengetedza mari
Vakavimbika vanogamuchira mazano matsva uye vanopindura nawo zvakapetwa mitengo yekutengesa pamishandirapamwe inoratidza chirongwa chitsva chekuvimbika
Vakavimbika vanopa yakanyanya kukwirisa mitengo yekudzvanya pane ongororo uye ongororo zvikumbiro, pamwe nekukoka kuti uve fan yechiratidzo pamasocial media saiti
Zviri kutovhiringidza kuti makambani mazhinji anopa madhora kune vachangowana vatengi vobva varega vatengi varamba vakavimbika uye vane chinetso chakanyanya pakutsika kwekambani. Zvakanakira chirongwa chekuvimbika mubayiro chinoratidzwa.
75% emakambani eUS ane zvirongwa zvekuvimbika zvinounza kudzoka pane kudyara. Uku ndiko kuri pachena kukosha kukuru kune vemabhizimusi vanoisa mari yavo kuzvirongwa zvekuvimbika.
Iyi infographic kubva kuZinrelo, Wepamusoro gumi mabhenefiti eiyo Kuvimbika Mibairo Chirongwa, inoratidza mabhenefiti ehurongwa hwekuvimbika mibairo:
Dhiraivha Dzokorora Kutengesa - izvi zvinoitwa nekupa mibairo yemhando yega yega yechiitiko, kusanganisira kugadzirwa kweakaunzi, kunyorera email, zvemagariro enhau zvinotevera, kurodha mapikicha, kutumira, nezvimwe. Iyi zvakare inzira huru yekumisikidza vashandisi vasina basa kana kuwedzera kutengesa nevatengi varipo.
Wedzera Avhareji Order Value - Vatengi vakavimbika vanotenga kakawanda uyezve vanoshandisa yakawanda pakutengesa.
Yakaderera Kwevatengi Kuwana Mari - Wedzera zvinongedzo kuchirongwa chako chemubairo kuti vatengi vako vaparidze izwi pane zvigadzirwa nemasevhisi. Izwi remuromo rinokurudzira rinotakura huremu hwehuremu nevatengi.
Ndiwedzere Kunamatira Kupokana neMakwikwi - Kana mutengi wako aine mimwe mibairo yakachengetedzwa, zviri kukatyamadza kuti vachatiza zita rako… kunyangwe mukwikwidzi akadhura.
Deredza Zvirongwa kune Vatengi - Une zvigadzirwa zvaunoda kufamba? Panzvimbo pekudzikisira zvakanyanya kune wese munhu, ipa yakakwira poindi sarudzo kune vakavimbika vatengi panzvimbo.
Wedzera Mitero Yekutendeuka - Ratidza huwandu hwemapoinzi ayo vatengi vanozowana neyako yazvino ngoro… uye ivo vangangoshandisa yakawanda kuwana mamwe mapoinzi.
Kufuridzira Chigadzirwa Sarudzo - Shandisa chakawanda kuti uite zvigadzirwa zvemumahara zvive zvakachipa kune vako vakavimbika vatengi.
Vaka Vakafuma Mapepa Ekushandisa - Unoda rumwe ruzivo kuti uve nechikamu chiri nani uye kugadzirisa kushambadzira kwako kutaurirana? Ipa mibairo yemubairo wekuzadziswa kweprofile uye kutambira scanning yekutenga kunze kwenyika
Wedzera Zviri Mushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati - Reward vatengi pakunyora wongororo, kupindura mibvunzo, uye kuisa mapikicha.
Wedzera Social Media Kubatanidzwa - Ipa vashandisi kuvimbika mapoinzi ekugovana munharaunda uye kukurudzira.
Zinrelo zvakare inopa mamwe mafomula pakuverenga kushanda kweimwe yeaya marongero emubairo mune yavo infographic.
Zinrelo inopa yemazuva ano, kuvimbika mibairo chikuva iyo inowedzera kudzokorora kutengesa uye pamutengi-mutengi mari kuburikidza ne360-degree vatengi vatengi. Zinrelo inokurudzira hukuru hwakawanda hwerutendo kusanganisira kutengeserana, zvemagariro, kutumirwa, kuita nekuvimbika kwetsika. Iyo inotsigira omni-chiteshi deployments iyo inotenderera pane desktop, mobile uye epanyama zvitoro.
Tags: kutenga vatengimutengi kutora mutengokuvimbika kwemutengimutengi kuvimbika chikuvanhamba dzekuvimbika kwevatengimutengi mibayiromutengi mibairo chikuvakuderedzawedzera avhareji kukosha kukoshayakaderera mutengi kutenga mutengokuvimbika mibairo chikuvamubairo chirongwakuomererama profiles emushandisiizwi remuromozinrelo